करातेको उन्नयनमा सरिता::Milap News
आश्विन १४ ।
नेपाली खेलक्षेत्रमा आफ्नो कला कौशल प्रस्तुत गरिरहेकी छन् सरिता सापकोटा । महिला भएर चुलो चौकामा मात्र सिमित नभएर स्वयम् आफ्नो लागि एवम् देशका लागि केही गरौ भन्ने कमै भेटिन्छन् । ती मध्ये एक हुन सरिता सापकोटा ।
सिराहको मिरच्यामा जन्मिएकी उनी काठमाडौंलाई कर्मथलो बनाएर आफ्ना कर्महरुलाई अगाडि बढाइरहेकी छन् । वि. स. २०४७ साल देखि करातेमा प्रवेश गरेकी उनी २०५४ सालमा ब्याक बेल्ट प्राप्त गरि अौपचारिक रूपमा यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन् । त्यसपछि उनले आफ्नो खेल जीवनमा कहिलै पछाडी फर्केर हेर्नू परेको छैन् । जहाँ उनले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउँन सफल भएकी छन् ।
निरन्तरको अथक प्रयास एवम् आफ्नो आत्मविश्वास एवम् परिवार साथीभाईहरूको हौसला र प्रेरणाले यहाँसम्म आउन सफल भएकी उनि आफ्नो शुरूको खेल जीवन सारै कष्ठकर भएको तर अहिले आफूले यहि खेल जीबनबाट प्रख्याती एवम् सफलतामा सन्तुष्ट देखिन्छिन् । सानै उमेरदेखि कराते खेल प्रतिको लगावले यहाँसम्म आईपुग्न सफल उनी पूर्वाञ्चलकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पहिलो महिला रेफ्री हुन् ।
कराते खेल क्षेत्रको उत्थानमा लागि परेकी उनी यहि खेल जीवनलाई विभिन्न प्रेरणा र हौशला दिदै अगाडि बढाउन चाहन्छिन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आयोजना हुने एक दर्जन भन्दा बढी कराते खेलको सफल र कुशल अम्पायर गरिसकेकी छिन् उनले ।
कराते खेलबाटै विभिन्न पदक र ट्रफी प्राप्त गरिसकेकि उनी पदक या ट्रफी पाउँदा लाग्ने खुशीमा बेग्लै अनुभव र गर्वले छाती ढपक्क फुलने उनको अनुभव छ ।
आफ्नो खेल जीवनमा कोही कसैसँग गुनासो नगर्ने उनी नेपाल सरकारको खेल प्रति हेर्ने दृष्टिकोण अझ भनौ करातेप्रति सरकार खेलाडीलाई प्रोत्साहन, हौशला र प्रेरणा दिन नसकेको उनी असन्तुष्ट देखिन्छिन ।